Azụmahịa okporo ụzọ AI na AIFPV3: ụgbọ elu ụgbọelu na-adịghị egosi ... Ihe mere
ajụjụ Azụmahịa okporo ụzọ AI na AIFPV3: ụgbọ elu ụgbọelu na-adịghị egosi ... Ihe mere
1 afọ 5 ọnwa gara aga #801 by laurentCazorla
Ejiri m ụgbọ mmiri Cevenn'air na FSX isi B738 na CRJ700 m na-ese onwe m ma na-achịkwa ofufe. Otú ọ dị, m chọrọ ịmepụta okporo ụzọ AI m na AIFPV3 ... Ihe niile dị mma iji melite ụgbọelu flights na-achịkwa ha, mgbe m na-amalite FSX Steam ọ na-ebudata ya dịka ọhụụ ọhụrụ mana mgbe m na-aga Airport ebe ụgbọ elu m chere iji gosiputa na Airport, na oge m nyere AIFP ntụziaka, onye ọ bụla n'ime ha gosipụtara ... Ana m ajụ ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi FSX Steam. N'eziokwu mgbe m chọrọ ịtọlite ​​AIFP na Steam (SE) enweghị m ike ịga n'ihu. Enwere m ike ịtọlite ​​dị ka FSX. Enweela m ụwa nke traffics AI na m agbalịworị itinye KLM WoAI B738 na ụgbọ elu EHAM / LFMT, ana m ezute otu nsogbu ahụ ...
Ọ ga-amasị m ịma ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi setịpụrụ traffics AI na-enweghị ka m gafere site na AIFP ... M na-eche dị ka mkpasu iwe
Oge ike page: 0.236 sekọnd